कस्तो छ आजको तपाईंको ग्रह दशा? हर्नुहोस् राशिफल – जीवनशैली
Home /जीवनशैली/कस्तो छ आजको तपाईंको ग्रह दशा? हर्नुहोस् राशिफल
एष्कअभकफाइदा सामान्य भए पनि तारिफयोग्य काम थालनी हुनेछ। धर्मकर्म तथा परोपकारमा प्रवृत्त भइएला। बुद्धिको उपयोगले अरूलाई आफ्नो पक्षमा लिन सकिनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। अरूको भरपर्दा प्रभावकारी काम नहुन सक्छ। विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। दिगो कामको जग बसाउन सकिनेछ।
गर्मीयाममा घरलाई कुल बनाउँछन् यी १० फूलले